कोरोना संक्रमणका कारण बीरगंजमा बाराकी ५५ वर्षिया महिलाको मृत्यु
इसीमाना सम्वादादाता बीरगंज ३० भदौ २०७७ 528 पटक पढिएको
बीरगंजमा बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १४ डुम्बारवानकी ५५ वर्षीया महिलाको सोमबार साँझ मृत्यु भएको छ ।
मधुमेह र उच्चरक्तचापको उपचारकालागि सोमवार मात्रै उहाँ बीरगंजको नारायणी अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको थियो । ११ बजे अस्पतालमा भर्ना हुनु भएको थियो उहाँलाई आइसीयुमा राखेर उपचार शुरु गरेका थियो तर साँझ मृत्यु भएको अस्पतालका प्रवक्ता डा. अतुलेश चौरसियाले बताउनु भयो ।
उहाँको मृत्युपछि कोरोना भाइरसको संक्रमण गर्न गरिएको गरिएको जिन एक्सपर्ट परिक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको डा. चौरसियाले जानकारी दिनु भयो ।
योसँगै वीरगञ्जमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ६२ पुगेको छ । साउनयता मात्रै ५८ जनाको कोरोना संक्रमणबाटै मृत्यु भएको छ ।
वीरगञ्जमा मृत्यु भएका ६२ जनामध्ये ४१ जना पर्साका छन्, दुई जनाको ठेगाना खुलेको छैन भने बाराका १४, रौतहटका ४ जना र सर्लाहीका १ जना छन् ।